आएन बिहानी चेपाङलाई – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
आएन बिहानी चेपाङलाई
२०७१ जेष्ठ २६, सोमबार ०२:३० गते
गएको फागुन १४ गते बेसीमाया चेपाङको कोखबाट ११औँ सन्तान जन्मियो । सुत्केरी भएपछि स्वाभाविक हो महिलाहरुले आराम गरेर बस्नुपर्छ । तर, फागुन २९ गते भेट हुँदा बेसीमाया आफ्नो नवजात शिशुलाई ढाडमा बोकेर गाईबाख्रा चराउँदै गरेको अवस्थामा फेला परिन् ।
चितवनको विकट पहाडी गाउँ कान्दामा छ उनको घर । बच्चा बोकेर काम गर्नु रहर नभएर उनको बाध्यता हो । रक्तश्राव रोकिएको छैन, तर गाईबाख्रा नफुकाई बस्न उनको मनले मान्दैन । भन्छिन्, ‘कराएर हैरान गर्छन् । भोक लागेपछि चुपचाप नबस्ने, त्यसैले फुकाउनै प¥यो ।’
सुत्केरीले काम गरेको सुन्दा नै अनौठो लाग्छ । यो काम पनि उनले आधा पेट खाएर गरिरहेकी थिइन् । सुत्केरी भएको १० दिन नहुँदै घरको अन्न सकियो । यो बेला जंगलमा पनि साग, तरूल, गिठ्ठा, भ्याकुरजस्ता कन्दमूल पनि पाइँदैन ।
पानी खाएर पेट भर्ने सोच पनि सफल भएन । ‘भोक नलागेपछि तिर्खा पनि नलाग्ने रहेछ । मैले त बिँडी बनाएर धूवाँ खाएर बसेँ । सुत्केरीका लागि मकै खोज्न हिँडे’ बेसीमायाका श्रीमान सीताबहादुरले भने । सीताबहादुरको आमाले मकै पठाइदिऊँला भनिन् । उनी केही ढुक्क भए ।
सीताबहादुरकी भान्जी लीलामायाले मकै लिएर आइन् । मकै देखेर सीताबहादुर रूनु न हाँस्नु भए । एक–एक गर्दै मकै गनेँ, जम्मा १७ घोगा थियो; आमाले पठाइदिएको मकै । ‘यही १७ घोगा मकैले सुत्केरी उम्काउने मेसो गरेको छु’, फागुन २९ गते भेट हुँदा सीताबहादुरले सुनाए । लोथर गाविस चितवनको सबैभन्दा विकट गाविस हो । सो गाउँको वडा नं. ९ मा पर्ने कान्दा झनै विकट गाउँ हो ।
दुईभन्दा तीन सन्तान नजन्माउने, गर्भवती र सुत्केरी हुँदा पोसिलो खानेकुरा प्रसस्त खाने । सुत्केरीपछि मात्रै होइन, त्योभन्दाअघि नै लामो समय आराम गरेर बस्ने परिपाटी नेपालमा पनि बढ्दै गएको छ । ११औँ सन्तान जन्माउँदा समेत अस्पताल नटेकेकी बेसीमायालाई यी सब कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको हो ।
बेसीमाया मात्रै होइन, प्रत्येक चेपाङ घरको कथा योभन्दा बेग्लै भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । विकसित समाजका लागि चाहिने आधारभूत कुराहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, चेतना र पूर्वाधारको पहुँचबाट चेपाङ समुदाय निकै टाढा छ । देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए, तर चेपाङ समुदायको सामाजिक अवस्था उँभो लाग्न सकेन ।
को हुन् चेपाङ ? ः
चेपाङहरु नेपालको अति सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने आदिवासी जनजातिहरु हुन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विसं २०६८ सालमा गरेको जनगणनाअनुसार नेपालभर चेपाङहरुको संख्या ६८ हजार ३९९ रहेको छ, जसमा ३४ हजार ६२० पुरूष र ३३ हजार ७७९ महिला रहेका छन् । चेपाङहरुको मुख्य बसोबास क्षेत्र चितवन, मकवानपुर, धादिङ र गोरखा जिल्ला हो ।
विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार चितवनमा सबैभन्दा धेरै २८ हजार ९८९ जना चेपाङहरु रहेका छन् । त्यसपछि मकवानपुरमा १९ हजार २३३, धादिङमा १४ हजार ४९२ र गोरखामा तीन हजार ४५४ जना चेपाङहरु रहेका छन् । यी चार जिल्लामा चेपाङहरुको घना बसोबास भए पनि नवलपरासी, तनहुँ, बाँके, बर्दिया जिल्लामा समेत चेपाङहरु बस्ने गरेका छन् ।
सहरी र मैदानी क्षेत्रमा चेपाङको बसोबास निकै कम छ । पहाडी क्षेत्रमा चेपाङहरु बस्दै आएका छन् । पाखो भिरालो जमिनमा खेती राम्रो हुँदैन । चेपाङहरुको खेती गर्ने शैली पनि निकै परम्परागत छ । पाखो जमिनमा खोरिया फाँडेर खेती गर्छन् । खोरिया फाँडेर फागुन–चैत्रमा रोपेको मकै भदौमा खान योग्य हुन्छ । मकै, कोदो र गेडागुडी उनीहरुको मुख्य अन्न हो ।
छाक टार्नै धौधौ ः
‘धेरै चेपाङहरुको राम्रो खेत छैन । पाखो बारीमा गरेको खेतीले तीन महिना पनि खान पुग्दैन’, चितवनको कोराक गाविस समिटार बस्ने चेपाङ अगुवा पहलमान चेपाङले सुनाए । घरको अन्न सकिएपछि चेपाङहरु वनमा पाइने सिस्नोको साग र कन्दमूलहरु वन तरूल, गिठ्ठा, भ्याकुर र भार्लाङ खाएर छाक
टार्ने गर्छन् ।
जंगली च्याउ टिपेर खाँदा परिवारै सखाप भएका दुःखान्त घटनाहरु पनि चेपाङ समुदायमा
छन् । विसं २०६७ सालको जेठमा चितवनको कान्दा गाउँमा विषालु च्याउ खाएर एकै परिवारका आठ जनाको निधन भयो ।
यस्ता घटना दोहोरिने पनि गर्छन् । कान्दाको घटना सेलाउन पाउँदा नपाउँदै विसं २०६९ सालको जेठमै जंगलबाट ल्याएको च्याउ पकाएर खाएका चितवनको पहाडी क्षेत्र कविलास गाविसको वडा नंं ७ चौकीगाउँका बुद्धिबहादुर चेपाङसहित उनकी श्रीमती र तीन छोराको निधन भएको थियो ।
अनिकालमा उनीहरुले खाने गिठ्ठा, भ्याकुर, भार्लाङ पनि स्वादिला हुँदैनन् । भार्लाङ हेर्दा तरूलजस्तै हुन्छ, तर यो विषालु चीज हो । यसको विष मार्न २४ घन्टासम्म पकाउने चितवन पिप्ले गाविस धमिलेका सुनबहादुर चेपाङ बताउँछन् । पकाउँदा आकाशको ताराले देख्यो भने पनि विष मेटिँदैन भन्ने उनीहरुलाई लाग्छ । त्यसैले, राम्रोसँग पातले छोपेर पकाउने गर्छन् ।
यो भार्लाङ पनि त्यति सजिलै पाइँदैन । जंगलमा निकै दुःख बेहोरेर खोज्नुपर्छ । वनबाट ल्याएको गिठ्ठा पातलो, गोलो चाना बनाई काट्छन् अनि खरानी पानीमा १०ं÷१२ घन्टा पकाउँछन् । गिठ्ठाको पातलो चाना एकपल्ट पानी उम्लिँदैमा पाक्छ, तर त्यसमा हुने तीतो र टर्रोपन हट्न लामो समय लाग्ने सुनबहादुर चेपाङ बताउँछन् ।
उनी भन्छन्– ‘छाक टार्नै यस्तो दुःख गर्नुपर्छ, हाम्रो बाँकी जीवनको अवस्था कति नाजुक होला तपाईं आफैँ सोच्नुहोस् ।’ राजधानीको नजिक सुगम जिल्लामै बस्ने चेपाङहरु यस्तो दुरावस्थामा छन् भन्ने कुरा धेरैलाई पत्यार पनि नलाग्ला ।
चेपाङलाई लगानी, बालुवामा पानी ः
चेपाङहरुको कष्ट राज्यले नदेखेको होइन । तर, कष्टबाट पार लगाउन भनेर बनेका योजनाले प्रभावकारी काम भने गरेको देखिँदैन भन्छन् चेपाङ अगुवाहरु । पहाडी क्षेत्रको भ्रमणमा आएका बेला राजा वीरेन्द्रले चेपाङहरुको अवस्था अत्यन्त दयनीय देखे । राजाको नजर परेपछि चेपाङहरुको थर पनि परिवर्तन भयो र प्रजा बन्यो ।
राजा वीरेन्द्रकै योजनामा विसं २०३७ सालदेखि सरकारले प्रजा विकास कार्यक्रम सुरू ग¥यो । चितवन, मकवानपुर, धादिङ र गोरखामा यो कार्यक्रम लागू छ । सरकारले यसका लागि लाखौँ बजेट विनियोजन गर्छ ।
प्रजा विकास कार्यक्रमको सम्बन्धित अधिकारी भएर विसं २०४९ सालमा चितवन जिल्ला विकास समितिको कार्यभार सम्हालेका थिए, प्रकाश पौडेलले । त्यो बेला चितवन जिल्ला विकास समितिको कुल बजेट २५ लाख रूपैयाँ हुन्थ्यो ।
प्रजा विकास कार्यक्रमलाई सरकारले त्यो बेला नै पाँच लाख रूपैयाँ दिने गरेको पौडेलले बताए । जिल्लाको कुल बजेटको २० प्रतिशत हिस्सा पाउँदा पनि ३६ मध्ये नौ गाविसमा बस्ने चेपाङहरुको अवस्था सुध्रेको देखिँदैन ।
अहिले पनि प्रजा विकास कार्यक्रम भनेर झन्डै २० लाख रूपैयाँको वार्षिक बजेट आउने गरेको छ । गणतन्त्र आएपछि पनि सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत चेपाङका लागि झन्डै पाँच सय
घर बनाइदिएको छ, तर पनि ओढारमा बास बस्ने चेपाङहरु भेटिन छाडेका छैनन् ।
‘हामीले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट परिचालन गरेका छौँ’ पौडेलले भने । प्रजा विकास कार्यक्रमको रकमबाट चितवन जिविसले शक्तिखोरमा छात्रावास बनाएको छ, जहाँ बसेर एसएलसी दिने चेपाङ विद्यार्थीहरु पढ्ने गर्छन् । अहिले पनि आठ लाख रूपैयाँ छात्रावासलाई दिने गरेको पौडेलले बताए ।
चितवन जिविसले शिक्षालाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम गरेपछि चेपाङहरुको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आएको पौडेलको दाबी छ । एक दशकअघि २४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चेपाङहरु साक्षर थिए । अहिले चितवनमा चेपाङमा साक्षरता दर ४० प्रतिशत नाघेको पौडेलले बताए । समग्र चितवनको साक्षरता दर भने ७७ प्रतिशत रहेको छ ।
विसं २०५८ सालपछि चेपाङहरुले प्रजा लेख्न छाडेर आफ्नो थर धमाधम चेपाङ नै कायम गरे । पुराना धेरैले पनि अहिले आफूहरुलाई प्रजा नभनेर चेपाङ नै बताउँछन् । प्रजा विकास कार्यक्रम भने जारी नै छ । यो कार्यक्रमले पारेको प्रभावको बारेमा राम्रो तरिकाले अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्छन् नेपाल चेपाङ संघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द चेपाङ ।
लालपुर्जा र नागरिकता नै छैन ः
आदिवासी भइकन पनि धेरै चेपाङहरुसँग आफूले खेती गर्ने जमिनको लालपुर्जा छैन । नागरिकता नहुने चेपाङहरु पनि धेरै नै छन् । नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङ भन्छन्– ‘हामीले विसं २०५७ सालमा अध्ययन गर्दा ८५ प्रतिशत चेपाङसँग नागरिकता र ९० प्रतिशत चेपाङसँग जग्गाधनी पुर्जा थिएन ।’
संघले अभियान सञ्चालन गरेपछि चेपाङहरुले नागरिकता लिने लहर चल्यो । फलस्वरुप, अहिले नागरिकता नभएका चेपाङहरु १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्यक्ष जितेन्द्रले जानकारी दिए । तर, लालपुर्जा नलिने चेपाङहरुको संख्या अझै पनि पहिलेकै जस्तो रहेको
चेपाङहरुले कमाउने खोरिया जग्गालाई वनले आफ्नो भनेर दाबी गरेको छ । वन क्षेत्रको जग्गाको लालपुर्जा पाउन समस्या भएको जितेन्द्रले बताए । कुनै–कुनै सिंगो गाउँमा कसैको पनि लालपुर्जा नभएको समेत अवस्था छ । पुस्तैदेखि चेपाङहरु बस्दै आएको चितवनको लोथर गाविसको वासवाङ गाउँ पूरै लालपुर्जाविहीन छ ।
परिवर्तनहरु पनि भएका छन् ः
शिक्षा क्षेत्रमा केही परिवर्तनहरु भएको चेपाङ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङ बताउँछन् । पहिला एसएलसी उत्तीर्ण हुने चेपाङहरु औंँलामा गन्न मिल्ने अवस्थामा थिए । अहिले स्नतकोत्तर तह उत्तीर्ण चेपाङहरु पनि प्रशस्तै भएका छन् । २३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको साक्षरता दर बढेर ४० को हाराहारीमा पुगेको उनले बताए ।
त्यस्तै, व्यावसायिक तरकारीखेतीमा पनि चेपाङहरुको झुकाव बढेको छ । राजनीतिक जागरण पनि आएको छ । पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा दुई जना चेपाङहरु समानुपातिक सूचीबाट संविधानसभामा समेत पुगेका थिए । नयाँ मान्छे देख्दा लुक्ने समुदाय संविधान बनाउने निकायसम्म पुगेको अवस्था थियो ।
कमजोरी कहाँ भयो ? ः
चेपाङ समुदायमा लामो समय काम गरेका अभियानकर्ता सोमत घिमिरे बिनायोजना पैसा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीले चेपाङहरु न आत्मनिर्भर भए, न उनीहरुको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आयो भन्छन् । पैसा खर्च गरेपछि चेपाङको सीप सुहाउँदो योजना पनि लौजान सक्नुपर्दथ्यो भन्छन् घिमिरे ।
‘बाहुन–क्षेत्रीलाई जे ग¥यो चेपाङलाई पनि त्यही गर्न खोजेकाले प्रतिफल राम्रो नआएको हो’, घिमिरेको तर्क छ । राजनीतिक संयन्त्रहरुमा पनि चेपाङहरुलाई समेट्ने परिपाटी बसेको भए चेपाङहरुको गुणात्मक विकास हुने अवस्था आउने थियो भन्छन् उनी ।
नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङ आफूहरुको बसोबास भएको क्षेत्रमा सरकारले बाटो, बिजुलीजस्ता विकासका पूर्वाधारहरु लैजान विलम्ब गरेकाले चेतना उठ्न समय लागेको धारणा राख्छन् । चेपाङ क्षेत्रमा बाटो र बिजुली लैजाने काम बल्ल हुँदैछ । बाटो र बिजुली भनेको विकासका साथै चेतनाको पनि संवाहक हुन् भन्छन् जितेन्द्र ।
बाटो मात्रै होइन, स्वास्थ्य उपचारका लागि समेत सरकारले ध्यान दिएन । जितेन्द्र भन्छन्, ‘आधुनिक उपचार विधि अँगाल्न नपाएपछि धामी, झाँक्रीको भर पर्नुप¥यो । यस्ता अन्धविश्वासले भरिएको उपचार शैलीले हाम्रो चेतनाको स्तर उकास्न कहिल्यै सकेन ।’
चेपाङ बस्ने पहाडी क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको छ । ‘ती सम्पदा पनि चेपाङको स्वामित्व कायमै रहने गरेर तिनैको उपभोगमार्फत चेपाङहरुको जीवनस्तर उकास्ने योजना ल्याउनुपर्छ’, चेपाङ अभियानकर्ता सोमत घिमिरे भन्छन् । आधुनिक खेती प्रणालीमार्फत जडीबुटी र फलफूलखेती त्यहाँको विकासको मेरूदण्ड बन्न सक्ने उनको ठहर छ ।